Iphupha malunga nePoplar ▷ ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Iphupha malunga nepoplar
Uhlobo lweepoplars lubandakanya malunga neentlobo ezingamashumi amathandathu ezahlukeneyo. EYurophu, isilivere kunye nompoplar omnyama zixhaphakile. Olona phawu lubonakalayo kwimipopla kukukhula kwawo okucekethekileyo kunye namasebe amahle, amasetyana kunye neefolokhwe. Yile ndlela ibonwa ngayo ngabantu abaninzi.
Imithi yepoplar ihlala ifumaneka kunxweme lwemilambo kuba ikhetha umhlaba ofumileyo. Imithi yepoplar ithathwa njengezityalo zovulindlela kuba ziyakwazi ukumelana neemeko ezingathandekiyo kwindalo. Kungenxa yoko le nto olu hlobo lomthi lusetyenziswa rhoqo kumahlathi.
Ukuba uthelekisa ipoplar nezinye iintlobo zemithi, unokubona ukuba ikhula ngokukhawuleza kakhulu. Ngesi sizathu, idlala indima ebalulekileyo kwimveliso yephepha, njengoko isetyenziswa apha njengomthi.
1 Uphawu lwephupha «Alamo» - Ukutolikwa ngokubanzi.
2 Uphawu lwephupha «Alamo» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «Alamo» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «Alamo» - Ukutolikwa ngokubanzi.
Uhlalutyo lwamaphupha ngokubanzi litolika isimboli sepoplar ephupheni ukuba lithetha ukuba ungumphuphi Ukuzithemba kwaye uqaphele ukunyaniseka nokuzimela kwakho kwi el mundo yomlindo.
Ukuba ipoplar ikhule inde kwaye intle ngelixa ilele, ezi propati ziphuculwe kakuhle kuloo mntu kuthethwa ngaye. Kwelinye icala, umthi wepoplar omileyo njengomqondiso wephupha, ubonakalisa ukunqongophala kwezi ndawo okanye ululeka umntu ophuphayo ukuba aqhubele phambili kwezi ndawo.
Imithi yepoplar enamagqabi ephupheni ibonisa ikhosi eyimpumelelo yeshishini. kulingwa kwihlabathi elivukayo. Iintyatyambo poplars eziluhlaza zikwabonisa ukuba ukhethe ikhondo elifanelekileyo.
Nangona kunjalo, ukuba ubona iipopu ezigwenxa okanye ezikhubazekileyo ephupheni lakho, uyakuxwayiswa ukuba ulahle iimbono zakho eziphosakeleyo. Ngaphandle koko, uya kulandela iinjongo ezingalunganga ezingakhokeleli kwiziphumo.
Umbono womthi wepoplar njengomfanekiso wephupha uhlala ubandakanya imisebenzi enzima kumntu ophuphayo jikelele kwihlabathi eliphaphamayo, elinokuthi libe nempumelelo kwaye libe yinzuzo.
Ukuba iphupha liwela ipoplar ephupheni lakho nge-ax okanye nge-chainsaw, kungekudala liza kubakho ilahleko ngaphambili. Oku kunokuba kokubini kungumxholo kunye nokunxibelelana kwindalo.
Uphawu lwephupha «Alamo» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo lokuchazwa kwephupha, uphawu "ipoplar" ngokuyintloko lufanekisela Indlela yobomi lomntu uphuphayo, kunye nesimo sakhe sengqondo kunye neenjongo, ezimyilayo.
Ukuba ipoplar ibonakala ephupheni njengomthi omileyo kwaye womelele, iphupha kufuneka libeyilo Ubungakanani ukuba uqaphele. Ipoplar egwenxa njengephupha, nangona kunjalo, inokuqondwa njengesilumkiso. Umntu ekuthethwa ngaye kufuneka alumke ngeenjongo ezimbi, kuba ziya kusilela.
Ukunyuka komthi wepoplar njengephupha kubonisa ukuba ungafumana isishwankathelo esingcono sakho. imeko yobomi Iminqweno. Ukongeza, ngamanye amaxesha kule meko yamaphupha inokubonisa ukuba umphuphi angathanda ukufezekisa inkqubela phambili kwezentlalo okanye kwezobugcisa.
Ukuba umntu olalayo uyawa kumthi wepoplar, uya kuba mnye kungekudala. ilahleko okanye ufumane ubunzima apho uya kuthi uveze ukugculelwa ngabanye abantu.
Ngamanye amaxesha isimboli yephupha "ipoplar" ikwasetyenziswa ngenxa yokukhula okude, okuthe ngqo komthi. Isimboli yamandla ijongiwe. Ngokwenkcazo yengqondo yephupha, umphuphi ufumana isibonakaliso samandla akhe ezesondo.
Uphawu lwephupha «Alamo» - ukutolika kokomoya
Kubonwa ngokwembono egqithileyo, uphawu lwephupha "poplar" libhekisa kwi Amandla obomi kunye namandla ophuphayo. Indlela ekugqitywe ngayo oku kwihlabathi lokuvuka inokuvela nakwimbonakalo yepoplar ephupheni.